Nolavina ilay mpisolovava Philippe Schol ary Schiphol nangalatra sandoka: Martin Vrijland
Ho be dia be amin'ny maro ary ho toy ny tsy misy dikany loatra rehefa miteny aho fa ny anarana hoe Philippe Schol dia misy rohy tsy voatanisa miaraka amin'i Schiphol. Topazo maso ny anaran'i Philippe Schol. Subliminal misy ny teny Schiphol. Neuro Linguistic Programming na subliminal programming dia zavatra mitranga tsy tinanao ao an-tsainao. Ireo dia ireo "teknika fiasan-doha" izay efa niasa tamin'ny haino aman-jery nandritra ny taona maro. Mazava ho azy fa mahatsiravina fa nisy mpisolovava iray voatifitra, saingy ny famonoana an'i Derk Wiersum dia tena mitovy amin'ny PsyOp (fandidiana psikolojia) ary eto koa dia tsy fantatsika raha toa ka tsy izany intsony ny raharaha. Ny fanambarana izay an'i Philippe Schol dia tandindonin-doza amin'ny hopitaly dia tsy manilika ny mety hisian'ny PsyOp. Amin'ny toe-javatra rehetra, azo atao ny miara-miasa amin'ireo olona mifandrafy ao amin'ny PsyOp sy / na miara-miasa amin'ny lalina. Nipoitra izao ny fampandrenesana ny fanonganana an'i Schiphol ho fanairana sandoka.
Tena ilaina ny mahatakatra ny fomba ahafahan'ny PsyOps mampifangaro amin'ny alàlan'ny lalina sy / na olona nandefitra, fa ambonin'izany rehetra izany ankehitriny na dia tsy iray volana aza dia miandry amin'ny fanerena amin'ny alàlan'ny fepetra vaovao na lalàna. Mamorona olan'ny fiantraikany lehibe amin'ny fiaraha-monina, miaraka amin'ny tanjona fanjakan'ny polisy bebe kokoa (vola bebe kokoa amin'ny polisy, ny fahamarinana sy / na ny tafika ary ny lalàna momba ny polisy bebe kokoa), dia ny fomba fiasa amin'ny lalao Psychological Operations. Ahoana no ahafahanao mamoaka ara-teknika ny PsyOp toy izany, ilay sarimihetsika Wag the Dog avy amin'ny 1997 izay efa nanoro hevitra tamina mody malefaka, saingy tsy azontsika atao ny manilika fa fomba fanaon'ny fampahalalam-baovao isan-karazany ary ny fomba ankehitriny dia mandroso lavitra noho ny teo aloha. . Nohazavaiko tamin'ny lahatsoratra maromaro io:
Ilaina ny mamaky tsara ireo lahatsoratra ireo. Ao amin'ny ahy ihany koa boky vaovao Miresaka an'ity lohahevitra ity aho indray ary miady hevitra momba ny fitovian'ny sarambola. Momba ny famonoana (azo atao PsyOp) an'i Derk Wiersum, tsy ela akory dia nitazona mafy ny minisitra Ferdinant Grapperhaus tao amin'ny varotra hetra mba hitahirizana vola bebe kokoa ho an'ny fanjakana. Ny vola kely madinidinika amin'ny 110 tapitrisa tsy latsaky ny! Eny, heverinao fa tsy maninona izany, satria tena ilaina tokoa izany an'izany heloka rehetra izany:
Na izany aza, nanana ny (PsyOp?) Izahay Trano fanoratana, ny (PsyOp?) manafika ny Trano Telegraaf ary nisy famononono tao anatiny (PsyOp?) Dingan'ny Marengo angamba amin'ny heloka bevava (manamboatra tena?) headache Mocro Mafia (lalina lalina?) Ridouan Taghi. Tsy fantatsika. Tantaran'ny haino aman-jery daholo ireo. Aroso amin'ny fampahalalam-baovao izany ary mino izany izahay. Ary raha mangina ny haino aman-jery hafa dia tsy maintsy marina. "Eny, manana ianao ry Martin Vrijland izay tsy mino na inona na inona hitan'ny media, fa hey izay tsy mifanaraka!”Sa izany dia mety hifanaraka amin'izany ary tena milalao ao amin'ny haavon'ny famokarana studio de John de Mol izahay? Eny, i John de Mol no tompon'ny vehivavy sy tompokovavy Algemeen Nederlands Persbureau.
Raha ny fomba fiasa subliminal amin'ny haino aman-jery, dia ilaina ihany koa hanondroana ireo fomba NLP voalaza etsy ambony. Io fomba fanaingoana tsy misy dikany io ary tsy manelingelina izay miasa mafy kokoa noho ny fananganana fandaharana amin'ny alàlan'ny fitantanana ny fahatsapana, izay ampiharina amin'ny olona isan'andro. Ny fandaharana an-kolaka toy izany dia mandeha amin'ny alàlan'ny teknika izay tsy fantatra afa-tsy ireo vondron'olona voafantina izay nianatra psikolojia, psychiatry na marketing. Matetika izahay miresaka momba ny lohatenin'ny lahatsoratra, sary na sary mamindra, na fananganana fehezan-dalàna izay tanterahana ity programa subliminal ity. Ireo boribory mihodina sy ireo mpamaky vaovao sy niverin-dàlana ao amin'ny vaovaon'ny NOS dia ohatra amin'ny fomba mivaingana momba ny fomba hipnose. Na dia mety hieritreritra aza isika fa ny illusionista toa an'i Victor Mids ihany no mampihatra an'ity zavatra ity, tsy miraharaha an'izay ataontsika isan'andro isan'andro amin'ny vaovao izany. Ary na dia efa novakintsika aza fa ny teknika toy izao dia ampiharina, mamaky hatrany ny gazety na mijery ny vaovao isika, satria mino isika fa afaka mandalo azy na maniry fotsiny ny 'hanaraka hatrany ny zava-mitranga'.
Ny lahatsary eto ambany dia mampiseho ny fomba fiasan'ny subliminal misy hery lehibe kokoa amin'ny tsy fahatsiarovan-tena noho ny heverinao fa azo atao. Mety ho toy ny fanairana sandoka tsy marina ny tatitra fanonganana tao Schiphol, saingy mety misy ifandraisany amin'ny karazana fandaharam-pivoriana ambany noho ny vaovao hafa ao amin'ny atidohanao ny tantaran'ny vaovao hoe: Philippe Schol. Tsy maintsy nentina foana ianao ary tazonina hatrany amin'ny fomba fankatoavana, mba handraisanao ireo lalàna vaovao rehetra ireo: vola bebe kokoa amin'ny fanjakana sy ny lalàna momba ny polisy bebe kokoa.
Miambena amin'ny mety hiseho eo amin'ny elanelan'ny governemanta sy ny media sy ny media hafa!
Ao amin'ny lahatsary, safidio ny 'dikanteny' ary avy eo misafidiana 'mandika' mandeha ho azy 'ary avy eo ny' Holandey 'ho an'ny dikanteny amin'ny Holandey
Lisitry ny rohy loharano: wikipedia.org, destentor.nl, rtlnieuws.nl
Tags: advocaat, deepfake, deepfakes, Derk, Derk Wiersum, Featured, tifitra, fijirihana, tatitra momba ny hijack, haino aman-jery, filazana, neer, hetsika, Philippe Schol, ara-tsaina, psyop, Schiphol, Wiersum
7 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 25
Indray dia mahafinaritra ny miantso idd, fanairana mpihaza ary mpanao gazety parool mihorakoraka mankany amin'ny efitrano fandehanana |
"Azonao atao ve ny milaza ahy ny tsy mety atsy?"
CUT & Paste ary ny ampitso dia manana lohahevitra iray hafa i Pauwtje (izay efa ela teo amin'ny talantalana.
Inona no manentana ny olona izay manolo-tena amin'ny hetsika toy izany, mba hahatonga ireo izay manamora ny torimaso tsara amin'ny alina fa mila tafika psiklogen ianao, dia mihamazava hatrany.
7 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 36
Inona no nataony?
7 Novambra 2019 ao amin'ny 01: 20
Ny zavatra mivoaka ao amin'ny MSM ho tranga dia mety ho fanazaran-tena ho an'ny mpiambina elite fotsiny. Jereo raha miasa daholo ny rafitra rehetra ary hizaha toetra ny fihetsiky ny ondrilahy mora azo ... fantarina avokoa izany
7 Novambra 2019 ao amin'ny 10: 33
Marina fa na dia manana ny hery sy ny vola aza izy ireo dia mitoetra foana amin'ny tahotra sy tsy fahatokisana ho an'ny sarambabem-bahoaka. Tsy hainao mihitsy. Izy ireo dia olona manam-pahefana miaraka amin'ny vola sy ny vola nefa tsy misy ny tena maha izy azy sy ny tsy fivadihany. Tsy amidy izany.
7 Novambra 2019 ao amin'ny 10: 38
Aza adino fa misy ny tahotra sy ny tsy fahatokisana satria tsy afaka ary tsy te-hamantatra amin'ny vahoaka mahazatra satria mpifindra monina izy ireo, elite mpifindra monina izay mitazona fanalahidy. Matahotra ny ho very tsy amin'antony ireo keypositions amin'ny tombontsoa miaraka, ny vola sns.
8 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 25
Eny, marina izany, ny vehivavy sy ny andriambavy amin'ny soratra dia manolo-tena hifikitra amin'ny kely indrindra na kely indrindra amin'ny fepetra noforoniny. Ny feon-java-manonofy rehetra dia arahi-maso akaiky ireo voarohirohy mahazatra. Mbola tsy nisy hafa mihitsy teto Madurodam, izay notazonina ny zaridaina sy ny fefy, lanja ny dikes .. hita ho tena marina, static ary malefaka .. ianao saika te hiaina eo 😀
« Adobe, Twitter ary haino aman-jery mahazatra no hiady amin'ny lalina?
Inona ny olan'ny nitrogen, maninona no mitaraina ny tantsaha ary nahoana ny fihenan'ny hafainganam-pandeha? »
Total visits: 13.805.824
Camera 2 op "Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl
Zandi Eyes op "Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl